Hafanàm-po nomerika · Aogositra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Aogositra, 2008
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Aogositra, 2008
Shina : Androany no entina eny amin'ny fitsarana ilay raharaha namonoana mpitandro filaminana
Shina 26 Aogositra 2008
Androany no hatao ny fitsarana an'i Yang Jia, rehefa nahemotra noho ny lalao olympika. Niditra tao amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana ao Shangai izy tamin'ny volana iny, ary namono mpitandro filaminana 6. Araka ny voalaza dia noho ny tsy fahamarinana nataon'ireo mpitandro filaminana sy ny herisetra nataon'izy ireo tamin'ny Yang Jia...
Iran : Ao amin'ny Yahoo ihany ny anaran'i Iran
Iràna 20 Aogositra 2008
Araka ny nolazain‘i Kourosh Ziabari dia naverin'ny Yahoo mail ao amin'ny lisitry ny firenena ao amin'ny takelaka fisoratana anarany i Iran rehefa nalany tao nandritra ny volana maromaro.
Cote d'Ivoire : Fihaonan'ny mpitoraka blaogy
Cote d'Ivoire 15 Aogositra 2008
Mikasa hikarakara “Blogcamps” ao Abidjan [Fr] i Théophile Kouamouo, mba hihaonan'ireo mpitoraka blaogy any an-toerana, hifampizarany ny traikefany sy hampianarana izay liana amin'ny fitorahana blaogy.
Fikirizan'ny mpitoraka blaogy iray hanampy an'i Baby Kamba
Afrika Mainty 15 Aogositra 2008
Raha miezaka ianao manaraka vaovao momba an'i Madagasikara, dia angamba mamaky matetika ny Madagascar Tribune. Ary raha nanao famandrihana ianao, dia namaky angamba vaovao nosoratan'i Herimanda R momba ny fandidiana tsy dia fanao ary vita soa aman-tsara nataon'ny departemantan'ny neorochirurgie teo amin'ny hopitaly Ravoahangy tamin'ny fahafolon'ny volana Jona. Herintaona i...
Etazonia : Mitoraka blaogy mba handraisan'ny Anglikana ireo Pretra sy Eveka LGBT
Amerika Avaratra 14 Aogositra 2008
Tamin'ny tapaky ny volana Jolay no natao tao amin'ilay katedraly manan-tantara ao Canterbury, ao Angletera ny fivoriam-ben'i Lambeth. Isaky ny folo taona moa no tanterahina ity fivoriam-be ity, izay hihaonan'ireo Eveka sy Arseveka manodidina ny 650 mitantana ny mpino Anglikana manodidina ny 80 tapitrisa maneran-tany. Farafahakely dia fito ny fikambanana...
Bahamas: Herisetra an-tokantrano
Karaiba 09 Aogositra 2008
“Araka ny nolazain'ny vaovao tamin'ny radio dia ‘vokatry ny fifamaliana an-tokantrano’ no nahatonga ny fahafatesan'ilay namako Bloneva Bethel. Nahoana moa io no ‘tsy fahafatesana tsy tokony ho nitranga vokatry ny tsy fahatongavan'ny polisy ara-potoana namaliana ny antso vonjeo tonga tany aminy?'” Weblog Bahamas no misarika ny saina amin'ity raharahan'herisetra mpitranga...
Karaiba 02 Aogositra 2008
Androany no antsoina hoe Androm-panafahana any amin'ny zarantany Indiana Andrefana (tsy Karana) - andro fankalazana ny fiafaran'ny fanandevozana, rehefa nambaran'ny lalàna fa olon'afaka amin'izay ny andevo rehetra. 170 taona aty aoriana, vitsy ny mpamaham-bolongana karaibeana nanome voninahitra ny Ntaolony, izay nanao sorona ny tenany hananan'izy ireo ny fahafahany ankehitriny...